Daawo Video: Maxay tahay Sababta uu u Tanaasulay Ugaas si weyn u diidanaa hannaanka doorashada Jubbaland?! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Daawo Video: Maxay tahay Sababta uu u Tanaasulay Ugaas si weyn u...
Daawo Video: Maxay tahay Sababta uu u Tanaasulay Ugaas si weyn u diidanaa hannaanka doorashada Jubbaland?!
Kismaayo (Halqaran.com) – Ugaas ka mid ah ugaasyadii sida weyn u diidanaa hannaanka doorashada maamulka Jubaland ayaa maanta ku dhowaaqay inuu ka tanaasulay fikirkiisii hore.
Ugaas Xuseen Ugaas Maxamuud Ugaas Qorane, oo kasoo jeeda beesha Cowlyahan ee Ogaadeen, ayaa sheegay inuu go’aankan qaatay isaga oo eegaya danaha bulshada reer Jubaland iyo dadka baylahan, si looga hortago dhibaato kale oo ka dhacda Jubaland.
Ugaaska ayaa sheegay in is qabqabsi sii socda oo Jubaland ka dhaca ay hoggaamin karta colaad ka dhacda deegaanada Jubaland, taasi oo uusan dooneyn.
Haddaba hoos ka Daawo Muuqaalka Ugaaska oo runta ka hadlaya:
hanaanka doorashada Jubbaland
Ugaas Xuseen Ugaas Maxamuud Ugaas Qorane
Atoore August 20, 2019 At 21:22
Ilaahay (swt) baa waaxid ah oo weeyn.Suldaanku waxuu isu badalay waxuu arkay in ay dhib badani ka imaankarto khilaaf kadhex dhaca dadka hadda isku haya arimaha Jubbalaan.Waa macquul in la baajiyo intii la baajiyin karo shidooyinka ay hurinayaan dad ka ytimid dibada jubbalaan.